Boogaha | November 2019
Guryaha cajiibka ah ee wheatgrass
Editor Ee Doorashada November 13,2019
Ugu Weyn Ee Boogaha
Sidee looga takhalusi karaa lo'da lo'da iyo inaad ka ilaaliso gubashada
Hogweed - warshad noo timid Caucasus in ka badan 70 sano ka hor, waxay si firfircoon u sii wadi doontaa balaarinta qaddarkeeda, qabashada degaanno cusub iyo kuwo cusub. Guryaha xagaaga iyo beeraleydu waxay caddeeyeen in hoggaanku u yahay khatar dhab ah: dhirta beeraha ee beeraha iyo beerahayaga; dadka (gaar ahaan carruurta iyo dadka da'da ah); loogu talagalay dhirta iyo fauna.
Way adagtahay in meel laga helo meeraheena meeshiiska qorraxdu aanu korin. Tani waxay liidataa aaladda liidata ee laga yaabo inay ka neceb tahay dhammaan beerta. Dadku waxay u bixiyeen magaca "cawska eeyga" ama "cows-cows." Pyraeus waxaa loo yaqaanaa xididadeeda, kuwaas oo aad u adag in ay soo jiidaan, iyo hareeraha cufan. Laakiin ma aha qof kasta ogyahay oo ku saabsan sifooyinka dawooyinka ee cawska.
Beerta beertii beertiisa: sida loo takhaluso cawska beerta
Beer taallaab ah waa mid ka mid ah cawska ugu adkeysta, taas oo aan si sahlan loo takhalusi karin. Marar badan su'aasha soo socota - on kaas oo carradu ku beeran korniinka thistle, maxaa yeelay waxa ay ku koraan nooc kasta oo ciid ah, laakiin jecel yahay chernozem si fiican u qoyan, kuwaas oo ay adag tahay in laga saaro. Xaqiiqada ah in cayayaanka noocan oo kale ah iyo sida sidan xajin leh, oo aan la maqlin, milki kasta ee aqalka ama beerta, sababtoo ah inta badan waa inay la shaqeeyaan isaga oo halis dheer oo xanuun leh.
Sidee looga takhalusi karaa cawska iyo cawska cawska
Weedhidda beerta ama beerta waxay qaadataa waqti badan waxayna u baahan tahay dadaal, iyo dhammaadka, ka dib maalmo yar ka dib, kobaca dhalinyarada ayaa ka baxa dhulka, laga bilaabo dalagyada dhirta ee nafaqooyinka. Mashruucyada beeraha, arrintan waxaa lagu xalliyaa iyadoo la adeegsanayo herbicides, burburinta dhirta aan loo baahnayn ee beeraha gebi ahaanba iyo waqti dheer.
Sida loola dagaalamo lagana saarto cawska beerta, siyaabaha barashada
Beeraley kasta oo dhan waa ogyahay in si ay u cunaan on uu khudradda iyo koritaanka khudradda dabiiciga ah ee beeraha, berry, waxaad u baahan tahay inaad si joogto ah ula dagaallanto dhirta dabacasaha dhirta - haramaha. Waxaa jira siyaabo badan oo looga qaado cawska beerta: kiimikada, farsamada, iyo dadkaba.
Sidee loola tacaali karaa farshaxanka beerta?
Noocan oo kale ah oo caan ah oo caan ah beerta beerta iyo khudradda, sida cirifka beerta, waxaa sidoo kale loo yaqaan cawska, dhuxusha indhaha, cawska, boodhka, daboolka fardaha. Waa saldhigga wax soo saarka daawooyinka leh saameyn wax ku ool ah oo ka soo horjeeda cudurada gallstone, shuban, cambaarta, dermatitis, lichen iyo cudurrada kale.
Xulashada sheekooyinka iyo xirfadlayaasha - yaanyo Timofey F1: sharaxaadda kala duwanaanta, astaamaha, talooyinka koraya
Qaababka isticmaalka saliidda madow ee madow ee kondomka
Noocyada qaadashada neonoxka la saaro walxaha kiciya ee isugeynta
Faa'iidooyinka iyo waxyeelada cunnooyinka
Tetra taran taribuunka
Noocyo Kaabashka cad
Dhirta dhirta loo yaqaan 'Mediterranean' - Santolina, waa geedo qurxoon oo leh ubaxyo aan caadi ahayn iyo caraf udgoon leh, taas oo ka heshay codsiyo balaadhan oo naqshad dhuleed si loo abuuro walxo xiiso leh iyo iftiin. Qoraalka Botanical Santolina waa geedo aad u jilicsan oo leh qaab wareegsan iyo caraf udgoon leh. Read More
Qaar ka mid ah fursadaha fudud ee loogu talagalay samaynta-baabuur-qabatayaasha
Belmu isha ku hay ilmagaleen: calaamadaha iyo daaweynta
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Boogaha 2019